ဇိမ်ခံခရီးသွားလမ်းညွှန်အဖွဲ့“ Away Lands” အဖွဲ့သည်ဒါဘီပူးပေါင်း | | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဖွဲ့ဦးတည်ဇိမ်ခံခရီးသွားလုပ်ငန်းဒါဘီပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် "Away မြား"
အဖွဲ့ဦးတည်ဇိမ်ခံခရီးသွားလုပ်ငန်းဒါဘီပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် "Away မြား"
နယူးယောက် City- Away မြေ, မေီ Seder နှင့် Brandon Burkley ၏ညှနျကွားအသင်း, ကြော်ငြာအတွက်သီးသန့်ကိုယ်စားပြုများအတွက် branded အကြောင်းအရာနှင့်အခြားကြော်ငြာစီမံကိန်းများကိုဒါဘီပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ခရီးသွားနှင့်စွန့်စားမှုအာကာသအတွင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းအတွက်အထူးကု, ထိုနှစ်လုံးကို 2016 အတွက်အချိန်ပြည့်ခရီးသွားနဲ့ content ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလိုက်၎င်းတို့၏ယခင်အလုပ်အကိုင်များထွက်ခွာကတည်းကနိုင်ငံတကာအောက်ပါအချက်များကိုရယူလိုက်သည်။ အဲဒီဗီဒီယိုကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ဟီလ်တန်, Hyatt ဟိုတယ်, Andaz, ဘာစီလိုစ်ဟိုတယ်, ခရီးသွားလာရေးကယ်လီဖိုးနီးယားရုံး, တူရကီ & ကိုင်းကော့စ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း, Sauza Tequila, သခွားမွှေးသီးဟိုတယ်နှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပကနေနေဆဲဓာတ်ပုံတာဝန်ကျခဲ့သည်။
ဒါဘီအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူရေဗက္ကာကြောသူမကငြိမ်သူတို့ဒါရိုက်တာအဖြစ်စတင်နှင့်ကမ္ဘာခရီးသွားစတင်ခဲ့ပြီးမကြာမီမတိုင်မီ 2016 အတွက်ရိုက်ကူးဘို့ထိုသူတို့ငှားရမ်းထားသည့်အခါသူမမူလက Seder နှင့် Burkley တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ် tabs များထားရှိမည်တော်မူပြီးမှ, သူမကအဆက်မပြတ်ခရီးသွားနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အာကာသအတွင်းလှပဆွဲဆောင်မှုပုံပြင်များပြောပြဘို့မိမိတို့ဖန်တီးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခွက်တဆယ်အားဖြင့်အထင်ကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။
"တစ်ဦးကိုချက်ချင်းဦးတည်ရာ၏စိတ်နှလုံးများနှင့်ပုံပြင်ကိုရှာဖွေသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်" ဟုကြောပြန်ပြောပြသည်။ "ငါသည်ဒါဘီမှပြန်လာသောအခါ, ငါချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်းစီဇယား join ဖို့သူတို့ကိုမေးတယ်။ "
"ငါသည်သူတို့သစ်ကိုတံဆိပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့် ပူးပေါင်း. ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများရှိသည်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့ကိုမိတ်ဆက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်," ကြောကထပ်ပြောသည်။ "သူတို့ကအကြောင်းအရာဖှံ့ဖွိုးတိုးကနေသေဒဏ်စီရင်မှတဆင့်ပြည့်စုံအထုပ်ကိုဆက်ကပ်။ All-In-One စီမံကိန်းများအတွက်သူတို့တစ်တွေပရီမီယံ option ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ "
Seder နှင့် Burkley ကျယ်ပြန့်ကျွမ်းကျင်မှု set ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ သူတို့ရဲ့အလုပျအမြားဆုံး, သူတို့စာရေးဆရာများ, ဒါရိုက်တာ, DPS နှင့်အယ်ဒီတာများအဖြစ်ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Burkley သည်သူ၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အဆင်းလှသောစတိုင်နှင့်အစွန်းအလုပ်မလုပ်ချေး, ရုပ်ရှင်သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုဗျာဒိတ်ရူပါရုံနှင့်အတူလေကြောင်းသူ့တစ်သက်တာစိတ်အားထက်သန်မှုပေါင်းစပ်ပြီးတစ်လိုင်စင်ရပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်မှူးသည်။ အဆိုပါနှစ်လုံးကိုလည်းရေအောက်ရိုက်များနှင့်မကြာခဏ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုအပေါ်ရုပ်ရှင်နှင့်နေဆဲဓာတ်ပုံနှစ်ဦးစလုံးကယ်တင်တတ်၏။ မကြာသေးမှီကအလုပ်လန်ဒန်, မြူးနစ်, အမ်စတာဒမ်နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်တည်နေရာများကိုမြှင့်တင်ရန်, Andaz အဘို့ကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်စီးရီးပါဝင်သည်။ အားလုံးပြောပြသည်, သူတို့ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Hyatt အဘို့, နက်ရှိုင်းသောမော်ရိုကို၏ဆာဟာရသဲကန္တာရ၌၎င်း, ၎င်းတို့၏ခရီးသွားလာရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူကွတ်ကျွန်းစုများနဂိုအတိုင်းကမ်းခြေအပေါ်မလေးရှား၏တောအပါအဝင် 35 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ပစ်သတ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့အားပုံပြင်များတစ်ခုချင်းစီဇိမ်ခံခရီးသွားများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများ, ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ဖြားယောင်း storylines နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှုပ်ရှားမှုများ feature ပါပြီ။
အဆိုပါစုံတွဲကိုမကြာခဏကွဲပြားသမားတွေနဲ့အတူနေရာများတွင်စိန်ခေါ်အတွက်အလုပ်လုပ်နေပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကိုပို့ဆောင်များအတွက်ရှားပါးအခွက်တဆယ်ရှိသည်။ "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးစတင်ခဲ့ပြီးမှငါတို့အလုပ်ပြန်ကြည့်, ကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းလာပါတယ်ဘယ်လိုဝေးဤမျှဂုဏ်ယူနေကြသည်" Burkley ရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့ကပုံမှန်အားဒါရိုက်တာနှင့် DP အဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကုန်သွယ်မှု။ မေီဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံ၌ရှည်လျားသောနောက်ခံရှိပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်၏ရှုထောင့်မှသူမ၏ဗေဒသက်ဆိုင်ပါသည်။ ငါဇာတ်ကြောင်းရုပ်ရှင်နဲ့စာပေအတွက်နက်ရှိုင်းသောအကျိုးစီးပွားများနှင့်ဇာတ်လမ်းပြောပြအစိတ်အပိုင်းချစ်ကြတယ်။ "
သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းမတိုင်မီက Seder စီးပွားဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်လုပ်သူရှိ၏ Burkley ခရီးသွား, ရုပ်ရှင်နှင့်ပျံများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူဘဏ္ဍာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမကြာမီတွင်သူတို့အလုပ်အကိုင်များကိုစွန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခရီးသွားလာအဖြစ်လမ်းမှယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က Instagram ကို၎င်းတို့၏ Adventures အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ပို့စ်တင်စတင်ခဲ့ပြီးချက်ချင်းအာရုံခံစားမှုစေ၏။ "" "ဒါဟာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များဖြစ်လာသည်သောအရာကိုသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိလေသာအပေါငျးတို့သပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားရ" Seder ပြန်ပြောပြသည်။ ယနေ့မိမိတို့၏အကောင့် 250,000 နောက်လိုက်ထက်ပိုဝါကြွား။ သူတို့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းသူတို့ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစာနယ်ဇင်းအာရုံကိုဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သူတို့ကမကြာသေးမီက Forbes မဂ္ဂဇင်းမှအတွက်ပရိုဖိုင်း၏ဘာသာရပ် ရှိ. , ကိုလည်း Huffington Post, InStyle, The Daily Mail ကများနှင့်မြောက်မြားစွာသည်အခြားမြေားတှငျ featured ပါပြီ။
ဒါဘီနှင့်အတူ teaming ခုနှစ်, Seder နှင့် Burkley သစ်တစ်ခုအဆင့်အထိသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းယူရည်ရွယ်ပါသည်။ "ကျနော်တို့ကပိုကြီးတဲ့စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းတွေလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, သောသူအပေါင်းတို့သည်တလျှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ရဲ့, "Seder ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့အတူတူရုပ်ရှင်အောင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ခဲ့ပြီးပြီ။ အခုတော့ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးကွဲပြားခြားနားအသင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ငါတို့ဖန်တီးမှုရူပါရုံကိုချဲ့ထွင်ရန်အဆင်သင့်ပါပဲ။ "
ဒါဘီထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဇာတ်လမ်းတွေကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ရိုးရာကြော်ငြာနှင့်ထွန်းသစ်စအတွေ့အကြုံမီဒီယာနှစ်ခုလုံးအနှံ့အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော full-service ကိုဘဏ်ဍာကွပ်မျက်အတွက်ထိပ်တန်းကြော်ငြာအေဂျင်စီများ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စံချိန်တံဆိပ်များနှင့်အတူ၎င်း၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်လူသိများခွက်တဆယ် directing ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအဘယ်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးမှတိုးချဲ့ထူးခြားထက်မြက်, Multi-Hyphen, ခေတ်ပြိုင်ဒါရိုက်တာတစ်တန်းစီဇယားကိုကျေးဇူးတင်ကွဲပြားခြားနားဖန်တီးမှုအလုပျအတှကျအစိုင်အခဲဂုဏ်သတင်းကိုတညျဆောကျခဲ့သညျ။
ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ကြော်ငြာ ဒါရိုက်တာများ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပြောင်းရွှေ့အပေါ်လူတွေ လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း 2019-04-30
ယခင်: iPi ဖျ Markerless Motion အရွယ်ရောက်ရေကူးစီးရီး၏ဒုတိယအရာသီမှာတော့ "အိပ်မက်ထဲက Corp က LLC" ဆော့ဝဲ Play ပေါင်းစည်းထားအခန်းကဏ္ဍ Capture
နောက်တစ်ခု: Calrec's Brio နှင့် Summa တို့သည်ပြင်သစ်ရုပ်သံလိုင်း L'Equipe အတွက်အားကစားအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ကြသည်